ရခိုင်မြီ: ဗိုလ်မင်းထောင် ဗိုလ်မင်း ကျော်သန်ဖြူ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်
ဗိုလ်မင်းထောင် ဗိုလ်မင်း ကျော်သန်ဖြူ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ ရွာတော်ခေါ် ဘင်ဒရိုဘင် ခရိုင် ဗိုလ်မင်းထောင်၏ ၁၆ ဆက်မြောက် ဗိုလ်မင်းဖြစ်သူ KS ဖြူခေါ် ကျော်သန်ဖြူသည် မနေ့က ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
မြန်မာ- ရခိုင် သမိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသာ ဗိုလ်မင်း KS ဖြူ (၇၈) နှစ် သည် လွန်ခဲ့သည့် ရက် ညနေပိုင်း အ နည်းငယ်ဖျားနာရာမှ ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်ကာ ရွာတော်မြို့ မိမိနေအိမ် တွင် ယမန်နေ့ နံနက် ၅ နာရီခန့် တွင် ကွယ်လွန်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခု ကွန်လွန်သွားသည့် ဗိုလ်မင်း KS ဖြူသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ ၁၆ ဆက်မြောက် ဗိုလ် မင်း ဖြစ် လာသူ ဖြစ်သည်။
သူသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂတ်စ်လ ၈ ရက်နေ့က ၁၅ ဆက်မြောက် ဗိုလ်မင်းဖြစ်သူ ဦးအောင် ရွှေဖြူ ကွယ် လွန်ခဲ့ပြီးနောက် ဗိုလ်မင်း ဖြစ်လာသူ ဖြစ်သဖြင့် အချိန်အားဖြင့် တနှစ်တောင် မပြည့်သေးခင် ကွယ်လွန် သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်မင်းအဖြစ် ခန့်အပ်ခံထားရသူမှာ အဆောင်အယောင်ဖြင့် နေထိုင်ခွင့်ရပြီး၊ ရှေးရခိုင်ဘုရင်များ လက် ထက် ကတည်းကပင် ရခိုင်ဘုရင့် နယ်မြေတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သော ဗိုလ်မင်းထောင်နယ်ကို နယ်စားကြီး အဖြစ် အပိုင်စားခွင့် ရရှိသည်။
လက်ရှိ ဗိုလ်မင်းတို့ အဆက်အနွယ်သည် မြန်မာ ဘုရင် ဘုရင်နောင်နှင့် အဆက်အနွယ်များ ဖြစ်ကြသည်ဟု ယုံကြည်ထားကြသည်။ ရခိုင်ဘုရင် မင်းရာဇာကြီး ဟံသာဝတီကို ၀င်တိုက်ပြီးနောက် မင်းသမီး မခင်နှောင်းနှင့် အတူ မြောက်ဦးသို့ ခေါ်ဆောင်လာသူ ဘုရင်နောင်၏ ဆွေမျိုးများဟု သူတို့က ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အစိုးရ အဆက်ဆက်လည်း အဆိုပါ စနစ်ကို မဖျက်သိမ်းဘဲ အခွန်ကောက်ပိုင်ခွင့်၊ တရားမ အမှုများကို သူအပိုင်စားရရာ နယ်မြေတွင် စီရင်ပိုင်ခွင့် ပြုထားသည်။
ဗိုလ်မင်းအား မည်သည့်နေ့ရက်တွင် မီးသင်္ဂြိုလ်မည်ကို ဆွေတော်မျိုးတော် မိသားစုဝင်များက များမကြာမှီ ထုတ်ပြန်မည်ဟု ဆိုသည်။
သတင်းများရှာရန် Jun 23 (4) Apr 28 (5) Apr 03 (6) Mar 30 (4) Mar 24 (5) Mar 21 (9) Mar 19 (4) Mar 17 (6) Mar 15 (10) Mar 13 (3) Mar 10 (9) Mar 07 (5) Mar 04 (13) Mar 03 (12) Mar 02 (1) Feb 25 (1) Feb 22 (1) Feb 21 (23) Feb 20 (3) Feb 18 (12) Feb 17 (9) Feb 15 (5) Feb 14 (7) Feb 13 (4) Feb 12 (8) Feb 06 (5) Feb 05 (11) Feb 02 (6) Jan 24 (2) Jan 23 (6) Jan 22 (10) Jan 21 (10) Jan 19 (11) Jan 16 (8) Dec 23 (2) Dec 22 (4) Dec 19 (7) Dec 09 (1) Dec 08 (5) Dec 04 (10) Dec 03 (8) Dec 02 (5) Nov 27 (1) Nov 22 (8) Nov 21 (13) Nov 20 (13) Nov 19 (2) Nov 18 (13) Nov 17 (6) Nov 16 (6) Nov 14 (12) Oct 24 (8) Oct 22 (7) Oct 20 (1) Oct 16 (2) Oct 15 (8) Oct 13 (8) Oct 10 (10) Oct 05 (4) Oct 04 (16) Oct 03 (10) Oct 02 (15) Sep 30 (16) Sep 27 (2) Sep 26 (9) Sep 25 (10) Sep 23 (1) Sep 22 (7) Sep 18 (6) Sep 17 (1) Sep 15 (4) Sep 13 (24) Sep 12 (18) Sep 10 (3) Sep 09 (20) Sep 05 (8) Sep 04 (6) Sep 03 (1) Sep 02 (4) Aug 28 (8) Aug 24 (2) Aug 23 (3) Aug 22 (12) Aug 21 (7) Aug 20 (2) Aug 19 (10) Aug 18 (13) Aug 17 (2) Aug 15 (7) Aug 14 (10) Aug 13 (7) Aug 12 (8) Aug 11 (14) Jul 30 (3) Jul 28 (4) Jul 27 (4) Jul 26 (11) Jul 25 (12) Jul 24 (33) Jul 23 (15) Jul 22 (1)
သံတွဲတွင် တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် သူဌေး ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းမှ မြို့နယ် ၄ ခုသို့ ဓာတ်အားထုတ်လွှတ် ပေးနိုင်မည်
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်အတွင်း တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် သူဌေးချောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှ သံတွဲခရိုင်အတွင်း ရှိ မြို့နယ် ၄ ခုသို့ လျှပ်စစ...
ကိုမိုးဇော် 21.03.2013 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္တီလာမြို့မှာ ရွှေဆိုင်ကနေ စတင်လိုက်တဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုကြေ...
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးဖေသန်း(မြေပုံမဲဆန္ဒနယ်)။ ။ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ...
အမေရိကန်ကို ခြိမ်းခြောက်လာမည့် အိုစမာဘင်လာဒင် လက်သစ်
အယ်လ်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံမှ ဓားစာခံ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သည့် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် မော့တား ဘယ်မော့ တားသည် အမေရိကန် နိုင...
ဂမီ်္ဘရ ဂမုန်းနက် ဝေသာလီ မိုးကြိုး
Written by ညီမင်းညို ငယ်ငယ် တုန်းက ကြည့်ခဲ့ ဖူးတဲ့ မျက်လှည်...
ရခိုင်မြီ. Simple theme. Powered by Blogger.